Joel Campbell Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Wada-noolaanshaha
Home AMERICAN STARS Joel Campbell Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Wada-noolaanshaha
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhamaystiran ee kubadda cagta ee ugu caansan oo loo yaqaan 'nickname'; "Black Panther". Dabeecadeena Joel Campbell iyo akhbaaraha aan la isku qorin ayaa kuu keenaya xisaab buuxa oo ah dhacdooyin la taaban karo oo laga bilaabo wakhtiga carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqaynta waxay ku lug leedahay sheekadiisa noloshiisa ka hor caan, nolosha jacaylka, nolosha qoyska iyo xaqiiqooyin badan oo OFF-Pitch oo aan wax yar ka aqoon isaga.
Haa, qof walba wuu ogyahay sirta farsamada casriga ah ee koobka adduunka 2014. Si kastaba ha ahaatee, taageerayaal yar oo kaliya ayaa wax badan ka ogaanaya Joel Campbell's Bio kaas oo aad u xiiso badan. Hadda oo aan adieu dheeraad ah, aynu bilaabi.
Joel Campbell Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka looyaqaano -Nolosha Hore
Joel Nathaniel Campbell Samuels wuxuu ku dhashay maalintii 26th ee June 1992, hooyadiis, Roxana Samuels iyo aabe, Humberto Campbell ee San José, Costa Rica.
Labada waalidba sida sawirka hoose ku jira ayaa ahaa ciyaaryahankii hore ee kale oo isbarbardhigay, waxaana uu ku dhacay jaceylkii ugu fiicnaa kubada cagta ee quruxda badan kuwaas oo wadajir u keenay.
Markii Humberto Campbell iyo Roxana Samuels ay soo saareen saddex meelood oo ka mid ah afartan carruur ah (Joel), hidaha kubadda cagta ayaa ku dhex wareegay soo gelitaanka doyna Roxana, hal sabab oo fudud. Wiilkooda jecel, Joel Campbell wuxuu ku dhashay juunyeerka shanaad ee qoyska Roxana Samuels oo matala dhalashada 4th ee ballanqaadka kubada cagta ee qoyska. Roxana Samuels (hooyadii Joel Campbell hooyadeed) waa sababta ugu weyn ee kubada cagta ee DNA-ga ee wiilkeeda. Maalmahaasna, waxaa loo yeeray Pelela, dabeecad ahaan, dabcan, Braziliyaanka halyeeyga ah Edson Arantes Do Nascimento, Pelé. Waxay dhalisay goolal badan oo la mid ah Pele inta lagu jiro waqtigeeda.
Roxana, ayaa mar ay xooga saartay in wiilkeeda Joel uu waxbartay oo kubada cagta ka soo baxay calooshiisii ​​oo uu si xun loola cararay. Waxay sidoo kale sheegtay in dhalashada, xitaa markii uusan awoodin in uu ereyada ugu horreeya u sharaxo, Joel horey u ogaa sida uu u dhoola cadeynayo iyo inuu si adag u dheelo kubada cagta. Awooddiisa si joogta ah u dhoola-cadeeya waa Joel iyo walaalihiis, Junior Humberto, Katherine iyo Nekisha, oo ka dhaxlay Don Humberto, aabahood. Labada waalidba waa Masiixiyiin daacad ah oo kor u qaadaya caruurtooda si ay ula mid noqdaan. Campbell wuxuu ku koray saddex ka mid ah walaalihiis (Magacyada kor ku xusan).
Joel Campbell Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka looyaqaano -Soo-koobidda Xirfadaha
Sida wiil yar oo kubadda cagta ah, kubada ayaa had iyo jeer ahayd qeyb muhiim ah oo ka tirsan DNA-da. Waxay ahayd qandho oo ka timid da 'yar oo Joel ah laba heysta. Waxaa jiray kubad firfircooni ah oo uu ku haysan lahaa haddii uu qof kale u duulay saqafka ama beerta qaar deriska ah oo aan diidi karin inuu kubadda ku soo celiyo. Waqtigaan, Joel Campbell wuxuu ahaa afar jir.
Kubadda cagta Campbell ayaa horay u soo muuqatay markii uu ilme ahaa. Humberto, aabihiis ayaa muhiim u ahaa Campbell da'da yar si uu u barto qiimayaasha kubadda cagta sida edebta iyo u-hurinta. Qeybaha kala duwan ee saamaynta waalidka, tegida dugsiga ayaa ka caawiyay Campbell inuu helo aasaas wanaagsan oo xirfaddiisa ah. Dabadeedna, isaga Iskuulku wuxuu siiyay fursad uu si macquul ah ugu ciyaaro kubada cagta tartanka xilliyada cayaaraha. Tani waxay ku dhufatay go'aankiisa inuu qaato 'kubada cagta' si dhab ah sida muuqata sawir qaade ah oo hoos ku qoran.
Joel wuxuu haystay go'aamo xasaasi ah si uu u riyoodo riyadiisa iyo riyadiisa uusan aheyn mid uun soo mara. Campbell waxa uu ka bilowday Saprissa, koox ka dhisan Costa Rican oo lagu magacaabo "CArajillos ee Valencia"San Rafael Abajo de Desamparados. Ka dibna, tababarayaashii ku guuleystay intii uu ku jiray xirfadiisa ciyaareed, waxay u qeexayaan inuu yahay weeraryahan degdeg ah oo awood weyn u leh inuu qaato ciyaartoydiisa. Waxa kale oo uu leeyahay xirfad aad u wanaagsan oo wadata waana mid fiican. Joel Campbell wuxuu ku dhameystay kubadda dhalinyarada isagoo ah da 'yaryar qaangaar ah.
Ka dib markii uu dhameystiray mustaqbalkiisa ciyaareed, Joel ayaa keliya laba kulan u saftay ka hor inta uusan xiddigaha Arsenal u wareegin suuqa kala iibsiga. Waxaa lagu eedeeyay inuu iska diiday labada kooxood ee Sevilla iyo Fiorentina inay la saxiixdaan Gunners.
Inkastoo uu Gunners uga soo biiray Saprissa oo ku yaal 2011, weeraryahankan ayaa sugayay shan sano ka hor inta uusan noqon ciyaartoyda joogtada ah ee joogtada ah isagoo uga mahad celiyay qaab ciyaareedkiisa 2014 World Cup. Waxa uu weli ku faraxsan yahay inuu ciyaaro kooxo dhowr ah inkastoo uu ka tagay Arsenal amaahda. Cayaartu waxay noqotey geed dahab ah oo loogu talagalay Campbell, oo ah isboorti halkaas oo uu ku soo gabagabeeyay. Inta kale, sida ay yiraahdaan, hadda waa taariikh.
Joel Campbell Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka looyaqaano -Nolosha Xiriirka
Righ ka soo carruurnimadeeda, Joel wuxuu noqday qof caan ah oo qiimo leh oo qiimo leh kaas oo uu uga mahad celiyay bandhigyada cajiibka ah. Awoodiisa iyo kartidiisa, iyo sidoo kale qaab nololeedkiisa oo ka soo jeeda garoonka dhexdiisa, samee sawir buuxa oo isaga ah. Xaqiiqdu waxa weeye, Joel Campbell wuu jecel yahay quruxda, dhab ahaanna wuu qaatay wakhti uu ku helayo sida ugu fiican qalbigiisa.
Joel ayaa helay jaceylka Maria Fernanda Cascante oo mar uu ku dhacay inuu noqdo kii ugu wanaagsanaa. Xiriirkoodu wuxuu ka kordhay xaalada ugu fiican ee jacaylka dhabta ah.
Isla markii uu la kulmay qurux qurux badan, Fernanda, marna lama qaadin ka hor inta uusan Joel Campbell u helin waalidkiis oo iyaga u siiyey barakooyinka, taageerada iyo la-talinta xiriirka.
Joel Campbell wuxuu taariikhda Fernanda u magacawday sanadada 8, jacaylkana waxaa hogaaminayey awoodooda ay isku kalsoonaan lahaayeen waqtiyada wanaagsan iyo kuwa adag.
Ka dib markii ay u dabaal-degeen sannad-guuradii 8 ee xiriirkooda, soo jeedinta guurka ayaa timid. Arooskooda waxaa lagu qabtay Iglesia de Pozos, de Santa Ana ee Costa Rica bishii June 2017.
Arooska waxaa ka soo qeybgalay saaxiibadiisa Costa Rican sida Yeltsin Tejeda, Bryan Ruiz, Iyo Keylor Navas. Joel Campbell wuxuu ku riyaaqay nolosha guurka cajiibka ah ee la soo bandhigay markii uu markale u dabaaldagay xaaskiisa uurka ee sawirka hoose.
Fernanda ayaa dhalatay gabadh qurux badan oo gabadhan oo magaceeda lagu magacaabo Brianna Campbell. Weli waxay ku jirtaa ilmahooda kowaad iyo keli ahaanba sida qoraal ahaan. Joel sida ku sawiran hoos waxaa kuxirnaa Brianna Campbell, gabadhiisii ​​quruxda badnayd.
Joel Campbell waa dareen iyo dareen, oo si qoto dheer uga taxadar arrimaha arrimaha qoyska iyo gurigooda.
Labada Joel Campbell, xaaskiisa iyo gabadhiisa quruxda badan ayaa jecel inay fasax u tagaan meelo qurux badan oo qurux badan.
Haysashada xaas leh oo qurux badan oo hubaal ah ayaa dhab ahaantii Campbell ka dhigtay mid aad u wanaagsan, sidaas darteedna aad ugu dhowaatay Ilaah. Joel wuxuu arkaa xaaskiisa, hooyadiis iyo gabadhiisii ​​sida tiirbogga labaad ee noloshiisa, iyadoo kan ugu horreeya uu yahay Ilaah.
Roxana Samuels, oo ah Joel hooyadii, ayaa shaaca ka qaaday in kahor ciyaar kasta, wiilkeeda wuxuu akhriyaa gabayga 27. Fikrad ahaan, tababarkan wuxuu bilaabay inuu noqdo talo soo jeedin labada xaaskiisa iyo hooyadiisa. Waa jidka Campbell uu aaminsan yahay qaab ciyaareedkiisa.
Sheeko 27 ayaa leh; The Sayidow Isagu waa nuurkayga iyo badbaadadayda, Kumaan ka cabsadaa? Rabbigu waa xooggii noloshayda, Kumaan ka cabsadaa?
2 Markii xumaanfalayaasha iyo cadaawayaashaydu i taabteen waxay i doondooneen jidhkayga, wayna ku dhaceen.
"Booqo Kitaabka Quduuska ah si aad u hesho nasashada!"
Joel Campbell Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka looyaqaano -Nolosha Qoyska
Waalidiintiisa: "Qoyska Humberto waa mid farxad leh", ayuu yidhi Doña Roxana hooyada guriga. Humberto Humberto ayaa ah goolhayaha kubadda cagta ee Seaman, halka xaaskiisa Joel Campbell uu yahay ciyaaryahan kubada cagta ciyaaraha kubada cagta ah.
Qoyska Campbell waxay leeyihiin aragti ah in aanay u baahnayn qof xaasid ah ama wax kasta. "Dhamaan xaaladaha isku midka ah, waa siman," ayaa sheegay in aabaha sawirkiisu hoosta ku xusan yahay isagoo daawanaya abaalmarinta kubadda cagta ee wiilkiisa.
Wax badan oo ku saabsan Joel Campbell's hooyada: Joel Campbell's hooyadii, kubada hore waxay ciyaartay xirfadeeda ciyaaraha Red Stars ee Atlantic kaas oo sidoo kale ah haweeney ninkeeda ku amartay ka hor inta aysan helin midba midka kale oo ay jacayl ku dhaceen. Roxana iyo wiilkeeda Campbell labadaba waa kuwo aad u dhow. Caddaynta waxaa lagu sameeyey qoraalka hoos ku qoran.
Dona Roxana markiiba qirtay: "Waxaan ilmo ku quudin jiray Joel mar walba barkin markuu ilmo ahaa. Ilaa hadda, Joel ayaa weli barkiisa u dhow. Wuxuu u qaadaa meel kasta oo uu tago, sida sheyga dhaman. Barkin isku mid ah! "
Walaalo: "Waa ciyaaryahan aan la ogeyn kaliya guulaha uu gaarsiisan yahay ciyaaraha fudud laakiin wuxuu awood u leeyahay inuu isdhexgalo islamarkaana uu kudhowo walaalihiis." ayaa sheegay in Michel, ina-adeerkiis. Joel Campbell si dhakhso ah ayuu u caawiyaa dadka kale, siduu sidoo kale u dhaqso badan yahay in uu iska hor imaado khilaafka qaraabadiisa iyo asxaabtiisa oo isaga xaasidinaya.
Joel Campbell Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka looyaqaano -Xaqiiqooyinka Qofka
Joel Campbell wuxuu jecel yahay fardaha laakiin wuxuu ka baqayaa inuu fuulo mid.
Campbell wuxuu ku nool yahay nolol aad u fiican oo aan ku ogaan karno Instagram. Waxa uu leeyahay shirkad gaar ah.
Asiidooyinka ku socda wadooyinka kala duwan, Joel Campbell waa saaxiib aad u dhow eeyga xayawaankiisa.
Sida uu qabo Awoodaha, Campbell waa Tenacious, aad u malaynaya, daacadnimo, shucuur iyo aad u caan ah.
Sida uu qabo Hiwaayadaha, Campbell wuu jecel yahay Farshaxanka, hiwaayadaha guriga ku salaysan, dejinta meel u dhow ama biyaha, caawinta kuwa jecel (gaar ahaan waalidiinta iyo walaalaha), iyo dedejinta waqtigiisii ​​firaaqada iyada oo mashiinka uu guriga joogo. Warbixinnada warbaahintu waxay soo jeedinayaan inuu yahay arday ku jira barnaamijka internetka ee jaamacadda.
Waa maxay Joel Campbell Jeclaa: Shisheeyaha, dhaleeceyntiisa hooyo iyo sii daayo macluumaadka ku saabsan noloshiisa gaarka ah.
Joel Campbell Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka looyaqaano -Xaqiiqooyin Wierd
Campbell isaga qudhiisa waa xoogaa dabeecad. Wuxuu mar uun ku iibsaday xirmooyinka 100 kubadda cagta si uu u helo. Nasiib darro, wuu diiday.
Wuxuu u dabaaldegaa himiladiisa isagoo salaan u ah habka loo wargaliyo ilma adeerkiis. Tani waxaa mararka qaar daba socda dabeecad adag sida hoos ku sawiran.
Hubinta FACT Waad ku mahadsantihiin akhrinta Joel Campbell Childhood Story iyo xaqiiqooyinka aan la sheegin. At LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan ku haboonayn maqaalkani, fadlan dhiibo faallooyinkaaga ama nagala soo xiriir!
Freddie Ljungberg Xaqiiqda Carruurnimada Untold Biography Xaqiiqda
Bukayo Saka Carruurnimada Sheeko Dheer iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Untold
Sheekada Carruurnimada Donyell Malen iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Untold
Reiss Nelson Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Taariikh nololeed ee Untold
Joe Willock Sheekada Carruurnimada Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Untold
Sheekada Carruurnimada Kieran Tierney Plus Xaqiiqda Untold Biography
Jose Antonio Reyes Sidee sheeko xambaarsan sheekooyinka sawir la'aanta
Nicolas Pepe Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha
Ainsley Maitland-Niles Childhood Story Plus Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha
Ian Wright Hooyo Sheeko Xogta Warka Xogta Leh
Jack Wilshere Sheeko dhalinyaro sheeko xeel dheer
Matteo Guendouzi Sheeko Xeel dheer oo Xogta Loo Yaqaano
Sokratis Papastathopoulos Sheeko dhalasho sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka sawir la'aanta